Momba anay - Shaoxing Shangyu Chaoqun Electric Appliance Co., Ltd.
dia naorina tamin'ny Jona 2012 ary hita ao amin'ny faritra indostrialy, tanàna Shangpu, distrikan'i Shangyu, tanàna Shaoxing, faritanin'i Zhejiang, Sina.Miaraka amin'ny fifamoivoizana mety, dia adiny iray monja amin'ny fiara avy any amin'ny orinasa mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Hangzhou.
Amin'ny alalan'ny fampandrosoana efa ho 10 taona, manana mihoatra ny 5000 metatra toradroa atrikasa maoderina;ary mpiasa matihanina 50 manana traikefa manankarena amin'ny sehatry ny vokatra jiro trano ary koa ny fitaovana avo lenta avo lenta ho an'ny famokarana faobe, fivoriambe ary fitsapana mba hifehezana mafy ny kalitaon'ny vokatra ho an'ny tanjona hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa.
Manampahaizana manokana amin'ny famakiana latabatra sy jiro gorodona;mampitombo ny jiro sy ny LED torchiere gorodona jiro, dia nampihatra taratasy fanamarinana ny CE, EMC, LVD, ROHS, ERP, ETL ary FCC ho an'ny ankamaroan'ny vokatra mafana fivarotana izay indrindra aondrana any amin'ny firenena maro toa an'i Etazonia, UK, Alemaina, Frantsa, Kanada sy Espaina.
Mifikitra amin'ny foto-kevitry ny raharaham-barotra momba ny tombontsoa iombonana sy ny ezaka tsy tapaka, dia nahazo laza lehibe eo amin'ireo mpanjifa niara-niasa nandritra ny fotoana ela noho ny vokatra tsara indrindra, fandefasana haingana, vidiny mifaninana ary serivisy tonga lafatra.
Manana orinasa fantson-drano plastika izahay10 milina fanindrona mandrosoizay manome antsika famatsiana singa plastika azo antoka.
Raha manana hevitra na hevitra vaovao momba ny vokatra ianao dia mifandraisa aminay.Faly izahay miara-miasa aminao ary mitondra ny vokatra afa-po ho anao.
2012 - Trano nanofa tao amin'ny faritra indostrialy Lianghu ary nanomboka orinasa
2014 - Nifindra tany amin'ny faritra indostrialy Shangpu ary nitombo haingana tamin'ny fidirana tany Etazonia makert
2020 - Nividy tany maherin'ny 4000M2 ary nanangana atrikasa orinasa manokana
kalitao azo itokisana
Nahazo mari-pankasitrahana maro ho an'ny ankamaroan'ny vokatray izahay ary miantoka fa ny vokatra tsirairay dia hosedraina mba hifanaraka amin'ny fenitra mifandraika alohan'ny fandefasana.
Hiezaka foana izahay hamita ny famokarana faobe ho an'ny baiko tsirairay mialoha mba hahazoana antoka ny fandefasana haingana.
Saika ny ampahany plastika rehetra dia mamatsy tena, afaka mifehy ny vidiny isika ary manome vidiny mifaninana kokoa ho an'ny mpanjifa.
Manana ekipa injeniera matihanina izahay ho an'ny rafitra sy ny famolavolana electonic mba hanomezana serivisy tsara amin'ny OEM / ODM ho an'ny mpanjifa amin'ny fikarohana vokatra vaovao.